कसरी भयो कहालीलाग्दो दुर्घटना ? « Onlinetvnepal.com
कसरी भयो कहालीलाग्दो दुर्घटना ?
Published : 13 March, 2018 11:02 pm
४९ जनाको मृत्यु हुने गरि सोमबार भएको बिमान दुर्घटनाको कारणहरुको खोजी हुन थालेको छ । त्रिभूवन विमानस्थलको इतिहासमा नै भएको कहालीलाग्दो दुर्घटनाको पछि अहिले पाइलटको नै दोष रहेको अनुमानहरु गरिन थालेका छन् र केही प्रमाणहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । विमानको सबभन्दा ठूलो जोखिमपूर्ण क्षण नै अवतरण र उडानको समयलाई मान्ने गरिन्छ । अवतरणको क्रममा नै युएस बंगलाको विमान दुर्घटना हुँदा पनि टावरको निर्देशन नमानेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
विमान दुर्घटना भएको केहि बेरमै कन्ट्रोल रुम र पाइलटबीच भएको सम्वाद सार्वजनिक भयो । जुन संवादमा कन्ट्रोलरुमको अधिकारीबीच पटक—पटक भएको कुराकानी सुनिन्छ । उक्त संवादमा जिरो टु र टु जिरो ले ठूलो भुमिका खेलेको सुनियो । टु जिरो भनेको कोटेश्वरतर्फबाट विमान अवतरण गर्नु पर्ने र जिरो भनेको विपरित दिशाबाट ल्याण्डिङ गर्नु । कन्ट्रोल रुमले युएस बंगला टुवानलाई भने म फेरि भन्छु, रन वे २ जिरो तिर नजानुस् । अहिले जुन पोसिजनमा छ, त्यहीँ रहनुस् ।
लगत्तै पाइलटले दायाँ फन्को लिँदै रन वे ०२ तर्फ ल्याण्डिङ गर्ने प्रयास गरे । रन वे जिरो टू र टू जिरो दुबै उपलब्ध छ । कुनमा गर्ने ? प्रश्नमा पाइलटले हामी टू जिरोमा अवतरण गर्न चाहन्छौं । र प्रयासमा लागे । केहीबेर सम्वाद सुनिँदैन र एक्कासि कन्ट्रोलले चेतावनी दिन्छ । एयर बंगला म फेरि भन्छु, त्यसो नगर्नुस् ।
यी नै संवादलाई आधार मान्ने हो भने पाइलट जिरो २ र २ जिरोमा अल्मलिएको सिनियर पाइलट वाइ के भट्टराईको ठम्याई छ ।
कन्ट्रोलको निर्देशनमा होल्डमा रहेका विमानहरुलाई एयरपोर्ट बन्द रहेको भन्दै लखनउ वा बनारस जान भनेसंगै बंगला विमानको टावरसँग सम्वाद टुङगिन्छ । यो संवाद टुंगिएको झण्डै १२ मिनेटपछि कन्ट्रोल रुमले विमान दुर्घटनामा परेको जानकारी पाउँछ । संवादको आधारमा पाइलट दोषी देखिए पनि छानविन कमिटीले यथार्थ जानकारी ल्याउने आशा भने गरिएको छ ।
काठमाडौं – चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धि तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।
एक बर्ष अघि अमेरिका हिँडेका युवा साढे दुई करोड सकेर रित्तो हात नेपाल फर्किए !
काठमाडौं – करिब एक बर्ष अघि अमेरिका हिँडेका रोल्पाका २२ बर्षीया नरेन्द्र घर्तीमगर साढे दुई
जटिल मोडमा निर्मला हत्या प्रकरण, पछिल्लो अनुसन्धान पनि संकास्पद
काठमाडौं – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धान थप जटिल मोडमा पुगेको
सत्तारुढ दलकै सांसदले मागे आईजिपी सर्वेन्द्र खनालको राजिनामा…(हेर्नुहोस् भिडियो)
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको दिगो